အမ်မလီ CANHAM ကားအဘယ်သူနည်း ၂၂ နှစ်အရွယ် YOUTUBER သည်တစ်မိနစ်အလုပ်အတွက်ပေါင် ၇၀၀၀ လျှော့ချခဲ့သည် - သတင်း
Emily Canham သည် ၂၂ နှစ်အရွယ် YouTuber ဖြစ်သည်။ သူသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပိုက်ဆံများစွာစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတစ်မိနစ်လျှင်ပေါင် ၇၀၀၀ လျှော့ချခဲ့သည်။ ယူကျုးဘ်သည်အမြတ်အစွန်းများစွာရပြီးသူမ၏နှစ်စဉ် ၀ င်ငွေသည်ဘာလဲဆိုတာပင်မသိခဲ့ပါ။
သို့သော်အမ်မလီ Canham ကားအဘယ်သူနည်း ပြီးတော့သူမအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာသိထားလဲ။
ဘန်းစကားတစ် kunt ဘာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ဆောင်း ဦး ရာသီညနေခင်း
မျှဝေသည် အမ်မလီ Canham? 8:16 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာလ 19, 2019 ရက်တွင် (@emilycanham)
Emily Canham ကဘယ်သူလဲ၊ သူဘယ်တော့ YouTube စတင်ခဲ့တာလဲ။
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကအမ်မလီသည် A-Level မတက်မီကျောင်းမှထွက်ခဲ့ပြီးသူမအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူမတစ် ဦး တည်းအချိန်များစွာကုန်လွန်နေပြီကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူမ၏အချိန်ကို အသုံးချ၍ အွန်လိုင်းနှင့်ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပဗွီဒီယိုများကိုစတင်လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
သူမပြောခဲ့တယ် The Daily Mirror: 'ငါသူတို့အတွက်ကျောင်းမတက်ခဲ့ဘူး (အဆင့် A) ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အရမ်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတယ်။
'' ယူကျုးဘ်ကအဲဒါကိုငါ့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အိမ်တွင်အချိန်များစွာမကုန်သောကြောင့် YouTube တစ်ခုလုံးကိုကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့။
'ငါဗွီဒီယိုအနည်းငယ်လုပ်တယ်၊ ဖျက်တယ်၊ မတင်ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး upload ကိုခြောက်လခန့်ကြာအောင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ '
နှစ်နှစ်အကြာတွင်သူမသည် L'Oreal မိတ်ကပ်သံတမန်ဖြစ်လာပြီးယခုတွင်သူမရှိသည် သူမ၏ YouTube ရုပ်သံလိုင်းတွင်စာရင်းသွင်းသူတစ်သန်းရှိသည်။
တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်ရဲ ??
မျှဝေသည် အမ်မလီ Canham? 8:41 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 3, 2019 ရက်တွင် (@emilycanham)
အမ်မလီကသူမသည်ဝါသနာအနေနှင့် YouTube ကိုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မတော်တဆသူမ၏အလုပ်အကိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ဆရာများကသူသည်ကျန်နှစ်၏ကျန်တစ်နှစ်နှင့်နောက်နှစ်သို့ပြန်နိုင်ကြောင်းသဘောတူခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အမ်မလီသည်အချိန်ပြည့်အလုပ် လုပ်၍ လန်ဒန်တွင်နေထိုင်သည်။
သူမက 'ကျွန်တော့်မိဘတွေကကျွန်တော့်ကိုခြောက်လကူညီပေးလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်အိမ်ငှားခနဲ့ YouTube ဘယ်နေရာကို ဦး တည်သွားမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လမ်းစလိမ့်မယ်။
သူမယူကျုမှရရှိသောပထမဆုံးလစာမှာကြော်ငြာမှတစ်ဆင့်ပေါင် ၆၀ ဖြစ်သည်။ ယခုသူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့ရှိပါတယ်။
မျှဝေသည် အမ်မလီ Canham? 7:47 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 4, 2019 ရက်တွင် (@emilycanham)
စောင့်ပါ၊ သူမတစ်မိနစ်လျှင်ပေါင် ၇၀၀၀ ကိုအဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခဲ့သနည်း။
Emily သည်သူမ၏ငွေကြေးများကိုထောက်ပံ့သောပို့စ်များ၊ တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များမှတဆင့်ရရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူမကသူမနဲ့အတူအလုပ်လုပ်မယ့်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ပျော့ပျောင်းနေတယ်။
သူမသည်မကြာသေးမီကပေါင် ၇၀၀၀ ဖြင့်သဘောတူညီချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်လုပ်ချင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမ်မလီကသူမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ္partာရေးအပိုင်းကနေသူ့ကိုယ်သူဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီးအေးဂျင့်တစ် ဦး ကိုငှားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင်သူမသိဘူး။
သူမက 'ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အခကြေးငွေများကိုကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်အသင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ငါဘာပြောတာကိုငါအတိအကျမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ '
အထက်တန်းကျောင်းဂီတ meme efron zac
အမ်မလီ Canham ချိန်းတွေ့သူကားအဘယ်သူနည်း
Emily ဟာ Busted တီးဝိုင်းအဖွဲ့ ၀ င်အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် James Bourne နဲ့ချိန်းတွေ့နေပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး ဟာ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကွာဟမှုကိုစိုးရိမ်နေကြပေမယ့်အစမှာအရှိန်နှေးခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာဂျိမ်းစ်ရဲ့အစ်ကိုကတဆင့်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှချိန်းတွေ့ကြတာပါ။
ဒီမှာငါကြိုက်နှစ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ချစ်စရာ lil piccy သည်အစောပိုင်းဘီစီ၌ငါတို့အတူတူအခြားဓာတ်ပုံများရှိသည်။
မျှဝေသည် အမ်မလီ Canham? (@emilycanham) ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၄၉ မိနစ်၊ PDT တွင်
Emily ဟာ Busted ရဲ့ဂီတထဲကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူမက: 'Busted နောက်ကျောကြီးမားသောအခါ, ဒါကတကယ်တော့ငါ့အရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ McFly သူတို့နှင့်အတူခရီးလှည့်လည်သောအခါငါတကယ်တကယ် Busted ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ငါ wow ဤသည်အေးမြသည်ထင်, ငါသူတို့ဂီတကြိုက်တယ်။ ငါငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကငါကသူ့ပန်ကာခဲ့တူသောဒါဟာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ '
• သင်၏ကျော်ကြားသော YouTubers အားလုံးနှင့်ယခုတွေ့ဆုံပါ